१२ दिन बाकी, मलेसिया द्वारा पुन: क्यालिब्रेसन कार्यक्रम नथप्ने घोषणा ! - jagritikhabar.com
१२ दिन बाकी, मलेसिया द्वारा पुन: क्यालिब्रेसन कार्यक्रम नथप्ने घोषणा !
मलेशिया इमिग्रेशनले डिसेम्बर ३१-२०२१ मा समाप्त हुने अवैधानिक आप्रवासी पुन: क्यालिब्रेसन कार्यक्रम योजनालाई अझै समय नथपिने भएका छन् । मलेशिया इमिग्रेशनका महानिर्देशक दातुक खैरुल जाइमी दाउदले आज मेडिया विज्ञप्ति मा यो जानकारी दिएका थिए।
उनले भने, “रोजगारदाताहरू जसले क्यालिब्रेसन कार्यक्रम पोर्टलमा डिसेम्बरको अन्त्यसम्म आफ्ना अवैधानिक आप्रवासी कामदारहरू दर्ता गर्छन् उनीहरु लाई खास नामावली मा राखिन्छ र अवैधानिक कामदारहरू जो यो कार्यक्रम मा दर्ता भएका छन् तर भिसा जारी गरिएको छैन या प्रक्रियामा छ त्यस्ता अवैधानिक कामदारहरूलाई छापा कारबाही गरिने छैन।
मलेशिया इमिग्रेशन महानिर्देशक दातुक खैरुलले रोजगारदाताहरूलाई अन्तिम समय सम्म न कुरी कन छिटो यो सुविधाको पूर्ण उपयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । इमिग्रेशन ले अटेरी गर्ने रोजगारदाता हरु लाई पछि धेरै समस्या आउने बताएका छन् ।
यो भन्दा पहिला गृहमन्त्री दातो हम्जाह को अवैध विदेशीहरु लाई चेतावनी आए सकेको हुदा, १ January २०२२ पछि मलेशिया इमिग्रेशन ले छापा मर्ने अपरेशन मा तिब्रता दिने स्वीकृत भएको छ।
मलेशियाले पहिला लटमा इन्डोनेसिया बाट १०,००० नया कामदार आउने त्यसपछि बंगलादेश र नेपाल।
उनले गैरजिम्मेवार रोजगारदाताहरूलाई पनि आलोचना गरे जसले आफ्ना कामदारहरूको हितलाई वास्ता नगर्ने लगायत आरामदायक आवास उपलब्ध गराउँदैनन्।
“हालसालै, मैले पन्जा उत्पादन गर्ने कारखानाको भ्रमण गरें, फिर्ता रकम करोडौं वा अरबौं (रिंगिट) हो तर यसले आफ्ना विदेशी कामदारहरूको लागि नराम्रो आवास प्रदान गर्‍यो, बेडहरू कफिनको आकारको मात्र छ, कल्पना गर्नुहोस्।